सुनको भाउ आज उकालो लाग्यो, चाँदीको पनि बढ्यो
काठमाण्डौ । यो साता लगातार दुई दिन घटेको सुनको भाउ आज बुधबार भने उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको हो। यो वृद्धिसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ६५० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो मंगलबार तोलमा १०० रुपैयाँ घटेको थियो। यो...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज मंगलबार पनि थोरै ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९१ हजार ८५० रुपैयाँमा झरेको छ। हिजो सोमबार पनि सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले सस्तो भएको थियो। हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२...
काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार स्थिर रहेको सुनको भाउ आज सोमबार ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९१ हजार ९५० रुपैयाँमा झरेको छ। हिजो आइतबार सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार...
साताभरि सुनको भाउ रु. ४०० ले सस्तियो, आज स्थिर
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ स्थिर बनेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ स्थिर रहँदै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ५० रुपैयाँ काय भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामै ९०० रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो। हिजो प्रतितोला ७२ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बिहीबार पनि ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ आज तोलामा ९०० रुपैयाँले गिरावट आएको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ७२ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार पनि सुनको भाउ तोलामै ७०० रुपैयाँ घटेको थियो। हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ४००...
आज सुनको भाउ ओरालो लाग्यो, चाँदीको पनि घट्यो
काठमाण्डौ । साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। यो साता निकै उतारचढाव भइरहेको सुनको भाउ आज तोलामा ७०० रुपैयाँ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज यो गिरावटसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ४०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ९५० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ मंगलबार तोलामै १ हजार ५०० रुपैयाँले...
सुनको भाउ आज एकैदिन रु. १५०० ले बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार सुनको भाउ ह्वात्तै बढेको छ। यो साता लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज तोलामै १ हजार ५०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यो बढोत्तरीसँगे आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ६५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार सुनको भाउ १००...
सुनको भाउ आज पनि घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार १५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो।...
सुनको भाउ फेरि घट्यो, चाँदी स्थिर
काठमाण्डौ । उकालो लाग्न थालेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको पहिलो दिन नै घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज आइतबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ७०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९२ हजार २५० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता अन्तिम कारोबार दिन सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले...
फेरि निरन्तर बढ्दै सुनको भाउ, साताभरि तोलामै रु. १६०० बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ बढ्ने क्रमले आज शुक्रबार पनि निरन्तरता पाएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ४५० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो बिहीबार एकैदिन १ हजार ६०० रुपैयाँले उकालो लागेको थियो। हिजो...
फेरि उकालो लाग्न थाल्यो सुनको भाउ, आजै तोलामा रु. १६०० बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बिहीबार ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै १ हजार ६०० रुपैयाँको बढोत्तरी भएको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९२ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार १५० रुपैयाँ कायम भएको छ। लगातार घटिरहेको सुनको भाउ गत मंगलबारदेखि बढ्न थालेको हो। गत मंगलबार तोलामा ५००...
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बुधबार पनि उकालो लागेको छ। लगातार घटिरहेको सुनको भाउ हिजो मंगलबारदेखि बढ्न थालेको छ। यही बढोत्तरीले आज बुधबार पनि निरन्तरता पाएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९१ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९० हजार ५५० रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा लगातार आइरहेको गिरावट आज सोमबार पनि जारी रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९० हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८९ हजार ५५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो पनि सुनको भाउ तोलामै ६०० रुपैयाँ घटेको थियो। यो गिरावटसँगै हिजो...
सुनको भाउ घट्ने क्रम जारी, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटले निरन्तरता पाएको छ। गत साता लगातार घटेकोको सुनको भाउ यो साता पहिलो कारोबार दिनमै तोलामा ६०० रुपैयाँले ओरालो लागेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९० हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९० हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत शुक्रबार पनि सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँ...